people Nepal » शारिरिक सम्पर्क गर्न आवश्यक तरिका, १८ वर्ष माथिकोले मात्र यो हेर्नुहोस! शारिरिक सम्पर्क गर्न आवश्यक तरिका, १८ वर्ष माथिकोले मात्र यो हेर्नुहोस! – people Nepal
स्त्री–पुरुष आपसमा नजर जुध्न थालेपछि स्त्रीमाडर र संकोच हटेर जान थाल्छ र उनी विस्तारें–विस्तारै निर्धक्क रुपमाहाँस्ने, ठट्टा गर्न थाल्ने छिन् । आँखाको भावद्वारा उनको चेतना मनमा कामभावनाका तरङ्गहरु उत्पन्न हुन थाल्छन् ।
स्तारैकुनै बहाना बनाएर उनका हात समाउने चेष्टा गर्नु पर्दछ यसबेला उनकोमुखाकृतिमा कस्ता भाव उत्पन्न हुन्छ यसलाई पुरुषले धेरै विचार गर्नु पर्दछ ।उनी हाँसिन् र रोमाञ्चक भावमा वार्तालाई अरु अगाड बढाइन् भने तपाई पनिअगाडि बढ्नोस् र उनको पिँडुवादेखि टाउकोसम्म हातले स्पर्श गर्नुस् । यसलेस्त्रीको शरीरमा एक प्रकारको विद्युतीय तरङ्ग उत्पन्न गर्दछ । जस्तो कुनैयुवतीले हाम्रो शरीरमा छुँदा छिरिङ्ग हुन्छ, त्यस्तै हो । यसपछि उनको मनमाकाम चाहनाको टुसा उम्रन शुरु गर्दछ ।
तपाईंले उनको शारीरिक सौन्दर्य, मधुर बोली, श्रृंगार मदमत्त मृगका झैंचयन उनको सुशील व्यवहारको खुला हृदयले प्रशंसा गर्नु पर्छ । प्रायः जसोसबै स्त्रीहरू आफ्नो प्रशंसा सुनेर धेरै आनन्दको अनुभूति गर्दछन् । आफ्नोअनुपम सौन्दर्यको प्रशंसा उनी विशेष सखानुभूति गर्छिन् । यसबाट उनकोपूर्णरुपमा मन जित्न सकिन्छ । यसपछि उनमा पूर्ण संकोच हट्दै उत्तेजना जागृतहुन थाल्छ । जब पुरुषले उनका स्याउझैं लालिमायुक्त गाला, ओंठ निधार, आँखा, घांटी, कान, चिउँडो, कपाल आदिमा प्रगाढ चुम्बन बर्साउन थाल्नु पर्दछ ।उनका स्तनहरूमा हलका रुपमा स्पर्श गर्न थाल्नु पर्छ ।
क्रमिक रुपमा एक अर्काका शारीरिक अङ्गहरूलाई कोमलतापूर्वक समाएरमाड्ने मुसार्ने, चुस्ने, खेलाउने, काउकुती लगाउने, चुम्बन गर्ने गर्नुपर्दछ जुन सम्भोगको दृष्टिले पूर्ण संवेदशील हुन्छ । पुरुषको शरीरकोसबैभन्दा प्रमुख कामकेन्द्र उसको लिङ्गको अगाडको भाग हो, जसलाई शिश्नमुण्डभनिन्छ । यसको स्पर्शले मात्र पनि पुरुष कामोत्तेजित हुन पुग्छ ।
यस्तै स्त्रीको शरीरमा ओंठ, स्तनका मुन्टाहरू भगवानासालाई खेलाएर, सुम्सुम्याए, काउकुती लगाएर चुम्बन गरेमा स्त्रीको शरीरमा विद्युतीयशक्तिझैं स्त्री कामातुर हुन्छिन् । उक्त प्रक्रियाले स्त्रीलाई सामान्यबनाई दिन्छ । यही मौका छोपेर पुरुषले उनका भित्री कपडाहरू फुकालि दिनुपर्छ ।यसबेला उनले आपत्ति गरिन् भने पुनः उनका स्तन मुसार्नुका साथै स्त्रीकामकेन्द्रहरू ओंठ चुस्ने, निधार, केश, आंखा, घांटी, छाती, पर्दन आदिमाचुम्बन गर्ने तथा पाखुरा, ढाडको तल–माथि र तिघ्राका बीचमा सुम्सुम्याउनेमुसार्ने गर्नु पर्दछ ।
यसपछि उनको यौनेन्द्रीबाट केही तरल पदार्थ बाहिर आउन थालिसकेको हुन्छ। यदि यो उनको पहिलो सम्भोग क्रिया हो भने आफु कामातुर भएर पनि लाजले उनीआफ्नो दुवै हातले स्तनहरु छोप्ने र दुवै तिघ्रा जोरेर कामेन्द्रीयलाईलुकाउने, आंख चिम्निले आदि गर्ने गर्दछिन् ।
यस्तो अवस्थामा समयद्वारा धैर्य गरेर मधुर व्यवहारले नै स्त्रीकोलाज, संकोच तथा डरको निवारण गर्नु पर्दछ । विस्तारै उनको कामाङ्ग विशेष भगोष्ठ, भङ्गाकुर र योनी वरिपरिको क्षेत्र, स्तन आदिमा पर्याप्त चुम्बन गर्ने, घर्षण तथा मुसार्ने मिच्ने गर्नु पर्छ । तत्पश्चात् उनको शरीरमाछचल्किरहेको कामेच्छा तीव्र रुपमा जागृत भएर आउँछ । उनी रोक्न सक्दिन ।सम्भोगको निम्ति आतुर हुन थाल्छिन् । उनी हाँस्न थाल्छिन्, नयनहरू नसिलादेखिन्छन्, पुरुषलाई अङ्गालो हाल्ने, चुम्बन गर्ने र टाँसिन थाल्छिन् उनकाओंठहरुमा अलिकति कम्पन हुन थाल्छन् । उनी हाँस्न थाल्छिन्, नयनहरू रसिलादेखिन्छन् ।
पुरुषलाई अङ्गालो हाल्ने, चुम्बन गर्ने र टाँसिन थाल्छिन् उनकाओंठहरूमा अलिअलि कम्पन हुन थाल्छन् । अब तिनी मदमत्त भएर आफ्नो योनीमाप्रवेशको लागि इच्छुक भइन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । स्त्रीमा यस्तो अवस्थाउत्पन हुना साथ पुरुषले उसको योनीमा आफ्नो शिश्नलाई विस्तारै—विस्तारैप्रविष्ट गराउनु पर्दछ । पहिलो आघातमा नै सम्पूर्ण शिश्न स्त्री योनीमापसाउन पर्छ । यसरी सम्पूर्ण शिश्न प्रविष्ट भइसकेपछि पुरुषले एक क्षणपर्खेर स्त्रीलाई प्रगाढ चुम्बन गर्नु पर्दछ । त्यसपछि कोमलतापूर्वक योनीमाभित्र—बाहिर हहल्का धक्का दिइरहनु पर्दछ ।
विस्तारै—विस्तारै केही समायन्तरणमा घर्षणमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ।जवसम्म कामान्द्रको चरम स्थितिको प्राप्ति हुंदैन तवसम्म घर्षण क्रिया जारीरहन्छ । कामानन्दको चरम विन्दुमा पुग्दै पुरुषको लिङ्गबाट झ्टकाका साथैतीव्र वेगले एक किसिमको लम्सादार सेतो तरलपदार्थ स्त्रीको योनीमा स्खलितहुन्छ ।